Hogganoota obsaa, cichaa, kutataa… – Kichuu
HomeNewsAfricaHogganoota obsaa, cichaa, kutataa…
Hogganoota obsaa, cichaa, kutataa…
Fakkii dhalootaa, kan kaayyoo ABO jalatti dhaloota guddisu.
Isin gammadaa! Waan jabaattaniif, waan gabrummaa diddaniif dararamtu. Duuba keessan miliyoonotatu hiriiree jira
Seenaa Gabaabaa Eng.Tasfaahuun Camadaa Gurmeessaa
Tasfaahuun Camadaa Abbaa isaa Camadaa Gurmeessaa fi harmeesaa Giddinash Beenyaa irraa bara 1976 godina Wallagga Bahaa, aanaa Guduruu, ganda Harbuu jedhamutti dhalate. Umuriin barnootaaf isa gahees barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi gidduu galeessaa mana barumsaa Looyyaa fi Finca’aatti barachuun, kan sadarkaa lammaffaa ammoo magaala Shaambootti itti fufee bara 1996 xumure. Qabxii olaanaa galmeessuunis Yuunivarsiitii Finfinnee seenee gaafa Adoolessa bara 2001 Digrii jalqabaan siivil injineeringiin eebbifame.
Erga eebbifamee booda, Fulbaana bara 2004 hanga Amajjii bara 2005 tti supha daandii Arsii- Baalee, pirojektii Abbaa Taayitaa Daandii Baadiyaa Oromiyaa fi pirojektii gamtaa misooma baadiyaa Arsii-Baalee Itiyoo-Xaaliyaaniin durfamu yuunit manaajerummaan hojjate. Itti aansee, pirojektii daandii Dagalee-Birbirsaa (pirojeektii idilee kan naannoo Sallee-Noonnoo kibba-lixa godina Iluu Abbaa Boor), pirojektii daandii qubatiinsaaf si’a takkaan deemaa turan afur: Kone-Cawwaaqaa, Baddallee-Kolosirri,
Gachii-Catee fi Yaanfaa- Ballattii irratti hirmaate. Akkasumas ijaarsa waajjira aanaa Cawwaaqaa magaalaa Iluu-Hararitti bu’uureffame projekti manaajerii ta’uun yoo dalagu, Onkoloolessa bara 2001 hanga Adoolessa bara 2003tti ammoo pirojektii Siree-Nuunnuu-Arjoo godina Wallaggaa saayit injinerii ta’uun, Tasfaahuun Camadaa saba isaa tajaajilaa ture.
Sababaa dararamni itti baayyatee fi lubbuun barbaadamuurraan kan ka’e, Tasfaahun biyya gadi lakkisee jalqaba bara 2005 gara Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Keeniyaa magaala Naayiroobiittis waajjira Mootummoota Gamtoomanitti Koomishinera Ol’aanaa Dhimma Baqattootaa (UNHCR)tti himachuun, nama nagaa roorroo dheessee nageenya ofiif dahannaa gaaafatu ta’uun gaafa mirkanaa’u waraqaa jireenyaa fi sochii UNHCR irraa argatee ture. Haa ta’u malee, sababaa ga’aa fi qabatamaa osoo hin qabaanne gaafa Ebla 27, 2007 walta’iinsa mootummaa Keeniyaa fi Wayyaneetiin waahilasaa injinar Masfin Abbabaa waliin ukkaamfaman.
Dhaaba gaaddidduu mootummaa Ameerikaan hundaa’e biyyoonni akka Yuugaandaa fi Keeniyaafaa miseensa itti ta’an, Joint Anti-Terrorism Task Force (JATT) jedhamu keessatti miseensa kan taate Itoophiyaan dahoo maqaa shororkeessitummaa adamsuu jedhuun ilmaan Oromoo baqattummaan biyyoota ollaa keessa jiraatan ukkaamsaa jiraachuun beekamaa dha. Haaluma kanaanis Tasfaahun Camadaa fi Masfin Abbabaa yakka sobaa maqaa shororkeessummaan faaluun gargaarsa mootummaa Keeniyaatti dhimma baatee ukkaamsuun sababa shororkeessitoota gaanfa Afrikaa Finfinneetti qoranna jedhuun akka dabarfamanii laataman gochuu dandeesse. Injinar Tasfaahuun Camadaa fi Injinar Masfin Abbabaas gaafa Caamsaa 12, 2007 halkan keessaa sa’aatii 2:00tti harkaa fi ija hidhamanii Moyyaaleerraan Itoopiyaatti dabarfamanii kennaman.
Biyyatti dabarfamuun duratti gaafa qabaman Ebla 27, 2007 irraa kaasee hanga gaafa Caamsaa 12, 2007tti (National bureau of Investigation-NBI) head office naannoo Tirm Valley jedhamu jiru keessatti qorattoota FBI Ameerikaa fi Keeniyaa Anti-Terror Police Unit jedhamuun qoratamaa turan. Erga qoramaata isaanii xumuranii booda dursaan qorannoo kanaa namni Firaansis jedhamu dargaggoonni ukkaamfaman kun yakka shororkeessitummaa waliin wal qabatu tokkkollee kan dalagan waan hin qabneef mootummaan Keeniyaa akka dafee gad lakkisuu qabu murtii dabarse. Garuu dubartiin Keeniyaa #Liiliyaan jedhamtu kan waajjira CID jedhamu keessatti hojjattu maallaqa mootummaa Itoophiyaarraa nyaattee jara lamaanis dabarsitee kennite.
Haala akkas dabaan xaxameen Injinar Tasfaahuun Camadaa fi Injirner Masfisn Abbabaa gara Maa’ikalaawwii geeffaman. Maikalawwii keessatti waggaa tokko fi ji’a sadii guutuu reebicha fi dararama daangaa hin qabne jalatti qoratmaa bahan.
Yakka dharaa miseensummaa ABOtiin himatamee jireenya mana dukkaanaa waggaa fi ji’a sadiin duubatti Adoolessa bara 2008 mana murtiitti kan dhiyaate Tasfaahuun Camadaa, gaafa Bitootessa 31, 2010 dhaddacha ta’aameen murtii hidhaa umurii guutuu itti murteeffame.
Du’asaa arguun malee murtii kamiinuu quufuu kan hin dandeenye mootummaan Wayyaanees, gaafa Ebla 04, 2011 mana hidhaa keessaa miliquuf karoorfachaa jirtu jedhee sobaan yakkuudhaan Masfin Abbabaa fi Tasfaahuun Camadaa mana hidhaa keessaa ukkaamsee ciraa dhabamsiise. Iddoo hin beekkamnettis geeffamanii reebichaa fi dararaa hamaa irraan ga’an. Dirmammuu qaamaa, madaa onnee fi godaannisa sammuu irraa fayyuu hin dandahamneen kan eele Tasfaahuun Camadaa dhukkubsatee akka hin yaalamne taassifamuun gaafa Hagayya 23/ 2013 halkan du’aan addunyaa kanarraa boqote.
“Bilisa ta’eee dhaladhee, bilisa ta’ee jiraachuu dhorkamus bilisummaa kiyyaaf qabsaawaa du’uurraa kan na dhorkuu danda’u humni tokkollee hinjiru, hinjiraatuus” jechuun kan beekamu Injinar Tasfaahuun Camadaa, adeemsa daddagalfataa fi ulfaataa eegale galmaan gahuuf aarsaa lubbuu itti kaffale.
Tsigee Warquu Qeerroo New Oromo Music 2020.
Abiy humna diina Oromoo hamaa lama itti yaadee filatee ofittiin marsee saba keenya fixaa jira.